Waqala ngo-1996, Airpull (Shanghai) Icebo lokucoca iye ukususela kuvuthwa yaba umenzi esichazayo okucoca isiguquli. Njengoko a hi-tech lweshishini yaseTshayina inkqubo mihla, inkampani yethu iye yabonisa ukuba aptitude yobungcali ukwenzela kuyilo, imveliso, kunye nokuhanjiswa. Sinikezela iindidi ezininzi iindawo replacement isiguquli kubandakanywa amalungu aphezulu-grade ezifana izihluzi zomoya, izihluzi ioli, kunye sahluli neoli emoyeni. Ezi mveliso ziyilelwe ngokukodwa ukuba isebenzisane kunye brand ezaziwayo-kakuhle ezifana Atlas Copco, Kaeser, Ingersoll Rand, Compair, Sullair kunye Fusheng. Ukongezelela izihluzi isiguquli, singakwazi kwakhona ukuvelisa izihluzi ioli kubunzulu baphantsi komhlaba kunye amacebo imoto xa abaxumi bethu.
platform yokusebenza ishishini lethu eliphezulu luquka inkqubo yolawulo ngobuchule oko kwizinto ezintsha, jikelele, kunye nokukhathalela abafuna iinkonzo. Imodeli lenkampani ulawulo lwabasebenzi yenzelwe ukuba kukhuthaza ukukhula ngayo italente ngamnye. Sikhuthaza ukufunda okuqhubekayo kunye nezifundo ezicwangcisiweyo rhoqo neesemina. Abasebenzi bethu buchule sele wafundiswa kakuhle iinkqubo zokuqinisekisa umgangatho.
Njengoko lejaji wokhuseleko bume kunye esikhethiweyo "Green Enterprise", siye savelisa Airpull (Shanghai) iphulo lokucoca ukuba Eco-friendly namandla iimveliso kakuhle. Zonke izinto lokucoca kuquka premium HV iphepha iglasi-ifayibha filter, besuka eUnited States Germany. Le zeendawana yaseMelika kunye nesiJamani nokwandisa ubuchule ucoco ukunciphisa iindleko zokusebenza ngelixa ukwandisa ubomi inkonzo enokubakho compressors moya. izixhobo imveliso Advanced kunye nobuchule yokuvelisa esulungekisiweyo iye yavumela ukuba ukufikelela umthamo yonyaka imveliso kweeyunithi 600 lamawaka. I ISO9001: 2008 System yoLawulo loMgangatho siyasebenza.
Nge Shanghai yethu isiseko-of-imisebenzi, siya kumazwe jikelele kwimimandla kuquka eYurophu, Umzantsi Melika, South-East Asia, kuMbindi Mpuma, njalo njalo Thina zokusasaza elibizwa Thailand kunye arhente zendawo kumazwe afana eIran nasePakistan. Ekhaya, uthungelwano lwethu nkonzo ibonelela engenangxelo lonke.
Ngowe-1996, saqalisa mveliso neekhatriji yesihluzi se amacebo ezintathu quintessential jikelele.
Ngowe-2002, ububanzi yethu obungcali wanatyiswa ukuquka izihluzi ze compressors umoya iqhosha lemenyu.
Ngo-2008, umzi-mveliso omtsha yakhiwa. inkampani yethu waba ebhaliswe phantsi kwegama Airpull (Shanghai) Icebo lokucoca ulwelo.
Ngo-2010, siye sasungula ofisi kwiindawo qhinga ezifana Chengdu, Xi'an, kunye Baotou.
Ngo-2012, inkqubo yolawulo lwentsebenzo BSc iye yaphunyezwa. Le lithathelwe ngempumelelo lugcwalisa iteknoloji entsha esuka zombini imvelaphi basekhaya angaphandle ibe nkulu wethu.
Ukususela ngo-2012 ukuya ku-2014, imarike yethu jikelele iye masinyane, yaye siye ngempumelelo baya Hannover Messe eJamani kunye PCVExpo eRashiya.